Wadamada Carabta oo Gogol Nabadeed u Fidineya Madaxda Soomalida
Buluugleey, Sunday, September 04, 2005
Wadamo badan oo ka tirsan Jaamacada Carabta ayaa soo bandhigay sida ay u daneynayaan iney Soomaalida dhex dhigaan nabad. Wadamadaas ayaa waxaa ka mida Libiya, Yemen, Masar iyo Sacuudiga. Waxaa meesha ka muuqata in kooxaha awooda weyn ee ka jira magaalada Muqdisho ay siyaasad ahaan isku dhow yihiin wadamada Carabta, taasna waxey ku qasabtay in Qaraamada Midoobey ay weydiisato wadamadaas Carabta iney gacan ka geystaan nabadeynta Soomaaliya oo aan shaqeyn karin haddii aysan kooxa fadhigoodu yahay Muqdisho oo leh aqlabiyad balaaran aysan ku qancin awood wadaaga dowlad qaran oo ka shaqeysa Caasimada Soomaalida ee Muqdisho.
Waxaa horay ugu dhawaaqay dib-u-heshiisiin madaxweynaha dowlada Yemen, arrimahaasna dhaqaale uga raadsanaya dowlada Mareykanka. Waxyaabaha uu la shir tegayana waxaa ka mida mashruuci horay looga xiray dalka Itoobiya oo ku saabsanaa la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka jira Geeska Afrika. Gobolka bari iyo dowlada Yemen waxaa ka dhex shaqeysta kooxo maafiya oo ka soo jeeda doonleyda labada dhinac, waxeyna iskaashi ku yihiin in ay bada ku daadiyaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ka soo qaxaya dhibaatada ka jirta koofurta Soomaliya. Ilaa iyo haddana ma jirto dowlada yemen arrintaas xal masax gala oo ay ka gaartey, marka laga reebo iney dalkeeda u diidey dadka Soomaalidaa oo u soo qaxaya. Siyaasiyeen badan uma arkaan dowlada Yemen mida wada wanaaga danaha Soomaalida.
Dowladda Masar ayaa maanta si rasmi ah iyana u soo bandhigtay inay qabaneyso shirweyne lagu heshiisiinayo dhinacyada khilaafka uu ka dhaxeeyo ee dowladda IGAD u sameeysay Soomaaliya . Xukuumadda Masar ayaa waxa ay sheegtay in ay soo dhoweyneyso qabsoomida kulan balaaran oo lagu qabto magaalada Qaahira kaasoo lagu dhexdhaxaadinayo Siyaasiyiinta Soomaaliya oo khilaaf beeleed ku kala tegey , waxaana Dowladda Masar ay sheegtay in gacan ka geysaneyso sidii go,aanada ka soo baxa kulanka ay qabaneyso ay uga fuli lahaayeen gudaha Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan . Wasiirka arimaha dibadda Masar Axmed Abul- Gheyd oo maanta shir jaraa,id ku qabtay magaalada Qaahira ayaa waxaa uu kaga dhawaajiyay in dowladda Masar iyo Q.M ay iska kaashan doonaan qabsoomida kulankaasi oo noqon doono mid lagu soo dhameeyo khilaafaatka iyo is afgaranwaaga u dhaxeeya Madaxda Soomaalida , waxaa uuna xusay in kulankaasi uu noqon doono mid lagaga dhabeeyo dib u hesheesiinta dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya . Axmed Abul- Gheyd ayaa waxaa uu intaasi ku daray in diyaar garow weyn uu u baahan yahay kulan noocan oo kale ah oo ummad fowdo 15 sano ku jirtay lagaga saarayo , waxaa uuna tilmaamay in shirka ay qabanayaan dhowaan uu noqon doono mid dhibaatada ka saara Shacabka Soomaaliyeed kana soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah . Axmed Abul-Gheyd oo ah wasiirka arimaha dibadda Masar ayaa ku nuux nuuxsaday in Q.M ay la soo jeclaatay dowladda Masar in ay marti geliso shirweyne lagu soo dhameeyo fikradaha is khilaafsan ee u dhaxeeya hogaamiyeyaasha Soomaalida , isagoo sheegay in Q.M ay arintan la doorbiday Masar markii ay dareentay xiriirka wanaagsan ee Qaahira kala dhaxeeya Hogaamiyeyaasha Siyaasadda Soomaaliya .
Dowlada Masar ayaa daneyneysa dhaqaale ay ku hesho shir dib u heshiisiineed oo ay u qabato Soomaalida. Masar waxaa aad u farxad geliyey iney waxba ka qabsoomi wayeen faragelintii dowlada Itoobiya ay ku heysey Soomaaliya si ay uga hesho dhaqaale. Waxaa kaloo hadda Masar u muuqday in maamulka Mareykanka ee madaxweyne Bush uu ka sii jeesanayo dowlada Itoobiya oo aan ku guuleysan iney dalkeeda ka hirgeliso hanaanka dimoqaraadiyada kadib markii maamulka Mele Zenaawi uu ku shubtay doorashadii u dambeysey ee laga qabanqaabiyey dalka Itoobiya. Masar hadda waxaa fooda ku soo haya doorashada madaxweynaha oo dhaceysa Arbacada soo socota, taas oo u dhacaya si dimoqaraadiya. Doorashadaas waxaa soo diyaariyey Tony Blair, Bill Clinton, Charles Kennedy, iyo wiilka uu dhalay madaxweynaha Masar ee loo yaqaan Gamal. Dowlada Masar waxaa si weyn u gacan bidixeeyey maamulka Jamhuuriga ee hadda ka taliya Mareykanka oo u arka Masar mid u dheelisa taageerada siyaasadeed ee Xisbiga Dimoqaraadiga Mareykanka. Hadda dowlada Mareykanka waxey cabsi ka qabtaa iney masar qabtaan dowlad ay hogaaminayaan Iqwaanu Muslimiin oo runtii taageero balaaran ka heysta shacabka Masar. Madaxweynaha Masar ayaa hadda $1m qarash ahaan ku bixiyey doorashada musharaxnimadiisa, lacagtaas oo ay ka kaalmeeyeen wadamada shisheeyahaa ee daneeya Masar. Mareykanka ayaa hadda doonaya iney soo celiyaan madaxtinimada Xusni Mubaarak iyo weliba iney u furan albaabo horay looga xirey oo ah in ay noqoto mariinka loo maro wadamada Carabta, gaar ahaan Soomaaliya iyo Suudan oo ay ku heli jireen dhaqaalo aan yareyn.
Dowladda Sacuudiga ayaa ahayd wadan cabsi weyn ka qabi jirtey dalka Soomaaliya oo hub badan ka heli jirtey Ruushka, wadamada u dhowna ku dhiiro gelin jirey isbedel siyaasadeed oo ku yimaada afgembi ama kacdoonka dadweynaha. Sacuudiga oo si dirqiya uga fakaday in Mareykanku u adeegsado cudud milateri kadib markii ay carigiisa weerareen argagixiso u dhasahay dalka Sacuudiga ayaa cabsi labaad waxey ka soo foodsaartay dowlad la’aanta ka jirta Soomaaliya, iyada oo laga dhaadhacsiiyey in Soomaaliya ay halis ku noqon karto nidaamka boqortooyada haddii ay halkaas ka dhalato dowlad islaama oo shacabka Sacuudiga ku dhiirigelin karta iney ka soo horjeestaan maamulka boqortooyada oo aan danaha shacabka islaamka iyo kan Sacuudiga aan midna u adeegeyn. Sacuudiga ayaa hadda qaba in nabadeyn laga sameeyo Soomaaliya lalana dagaalamo kooxa mitidkaa ee ka jira gudaha Soomaalida. Waxaase sacuudigu uu markasta ka soo horjeeda faragelinta Itoobiya iyo in Mareykanku uu ku duulo Soomaaliya oo aan hadda lahyn wax dowlada ee la aqoonsan yahay.
Boqorka dalka Sacuudiga Amiir Cabdalla Bin Cabdulcasiis ayaa u bandhigay golihiisa wasiirada codsi uu soo jeediyay Col. C/laahi Yuusuf Axmed oo uu ku dalbanayay Dhaqaale. Kulanka Golaha wasiirada xukuumadda Sacuudiga oo ka dhacay Qasriga Al-salaam ee magaalada Jiddah ayaa boqorka dalka Sacuudiga waxa uu soo bandhigay kulankii isaga iyo C/laahi Yuusuf ku dhex maray magaalada Jiddah 23dii Agoosto iyo codsiga gaarka ah ee ka yimid dagaaloogahaas, kaas oo ku aadanaa in laga taageero dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. War qoraal ah oo kulankaasi laga soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Sacuudiga ay xoojineyso xiriirkii kala dhaxeeyay Somaliya iyo soo celinta adeega bulshada, waxaana lagu sheegay qoraalkaasi in Col. Cabdullahi Yusuf laga doonayo in uu sameeyo dadaal badan oo ku aadan dhinaca nabadda iyo dib u heshiisiinta. Sacuudigu waxa uu ka gaabsaday inuu cadeeyo dhaqaala laga codsaday inuu soo gaarsiinayo Soomaalida iyo in kale. Aad bay u wanaagsanaan lahyd haddii Sacuudigu uu dhaqaale xoogan siiyo dadweynaha Soomaaliyeed si ay ugu dhistaan adeegyadii bulshada oo horay uga burburay. Waxaa la saadaalinayaa in dhaqaalahaas uu gacanta u geli doono dowlada Masar oo hadda diyaarineysa googol nabadeed oo ay u fidiso madaxda Soomaalida.